I-China Balcony Glazing System Kinzon09 ifektri nabaphakeli | Kinzon
Akunazinhlaka phakathi kwamapulasitiki engilazi futhi ifasitelana ngalinye lengilazi lingashelela ngokukhululekile kwesokunxele noma kwesokudla ukuvula umoya omncane noma inhloso yokuhlanza ngohlelo lwe-Kinzon09 balcony glazing system. Ukuvalwa noma ukuvulwa kwe-balcony okuphelele noma okuyingxenye kutholakala. Izici zohlelo lwe-Kinzon balcony glazing system lwenza kube lula kakhulu ukuhlanza, ungageza i-reverse kanye ne-facade ngawo wonke amafasitela engilazi.I-balcony efakwe ne-Kinzon09 balcony glazing system ibukeka njengekholomu lephakethe le-balcony elibonakalayo. t kulimaza ukubukeka nezitayela zesakhiwo, kepha futhi kunengxenye enkulu ebuhleni obuhlanganisiwe bekhamela.
Uhlelo lwe-Balcony glazing system-kinzon09
Izici zesistimu yeFinzone09 uhlelo lwe-balcony glazing system
1. Amaphrofayili ama-Stronger: Ithrekhi ephezulu ingubukhulu be-3mm nokubaluleka kwephuzu kungu-5mm ubukhulu ku-Finzone09 balcony glazing system. Ububanzi bephrofayili yengilazi bungama-29mm kanti ukuphakama kungama-41mm, ukubaluleka kwephuzu kungububanzi obungu-2,5mm kohlelo lwe-Finzone09 balcony glazing system.
2. Ama-rolling: I-Finzone09 uhlelo lwe-balcony glazing lusebenzisa amasondo amakhulu atholayo kanye nama-slide kahle. Ububanzi besondo elilodwa lokuthwala liyi-36mm kanti ukuphakama kungu-11mm.
3. Ama-axle we-Hinge: Uhlelo lwe-Finzone09 lwe-balcony glazing lusebenzisa i-SS304 kuma-axles angama-hinge ukuze ikwazi ukuma ngesisindo esikhulu.
I-4 cap cap yokuvikelwa: Uhlelo lwe-Finzone09 glazing balcony lusebenzisa ukuvikelwa kwe-nylon kumaphrofayili engilazi ukugwema ukulinyazwa. Ukuvikelwa kufana nezitebhisi futhi ukubekwa uphawu kungcono kakhulu.
5. Ukubekwa uphawu okungcono: Akukho magebe phakathi kwamaphrofayili wethrekhi kanye namaphrofayili engilazi. Uhlelo lwe-Finzone09 lokuvunguza lwe-balcony alunaso igebe phakathi kwepaneli yengilazi yokuqala neyokugcina enamaphrofayli aseceleni.
I-Shanghai, China (i-Mainland)
Ingilazi efudumele noma ingilazi evuthisiwe eyenziwe
Ukubekwa uphawu kwe-PC
Ubunzima bephrofayili yethrekhi
Elula ukuhlanza iwindi ngaphakathi nangaphandle
Akukho luhlaka lwe-aluminium phakathi kwengilazi
Izinto zephrofayili: Izinto ezisetshenzisiwe ze-Aluminium alloy 6063T5 zamaphrofayili.
Ukubekwa uphawu okuhle kakhulu: akukhogebe phakathi kwamaphrofayili wethrekhi kanye namaphrofayili engilazi. akukho igebe phakathi kwamaphaneli engilazi okuqala nawokugcina anamaphrofayili aseceleni.
Ama-roller Angcono: Sebenzisa amasondo amakhulu athwele futhi uslayida ngokushelela. Ububanzi besondo elilodwa lokuthwala liyi-36mm kanti ukuphakama kungu-11mm.
Akunama-rivets: Faka ngokukhethekile i-glue ukuxhuma iphrofayili yengilazi nengilazi, azikho izimbotshana nezimbobo kuphrofayili yengilazi.
Isisetshenziswa sokuxhuma: Sebenzisa i-SS304 ukuxhuma amaphrofayli wethrekhi ukuze uqinisekise ukuzinza kokuxhumana.
Ingilazi: Sebenzisa ingilazi enomsindo we-8mm noma ingilazi engu-4 + 4 engilisiwe.
Esedlule: Umthombo wefektri i-Handrail ene-Glass - I-Aluminium Bi Fold Door JR75 - Kinzon
Olandelayo: I-Balcony Window Kinzon50